လှပတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကိုပေါ်လွင်အောင် ခပ်မိုက်မိုက်ပုံစံလေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ချပြလိုက်တဲ့ ဖူးပွင့်သခင် – Online News Post
စမတ် ကျတဲ့ အရပ် အမောင်း အပြင် ဆွဲဆောင် မှု ရှိတဲ့ အလှ တရားတွေ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ယောကျာ်း လေး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ အသည်း တွေကို ခြွေချ ထားနိုင် တဲ့ သူက တော့ မင်းသမီး ချော လေး ဖူးပွင့် သခင် ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။ သူမဟာ ဗီဒီယို ဇာတ်ကား တွေ ကို များစွာ ရိုက်ကူး လာ ခဲ့ပြီး ပီပြင် တဲ့ သရုပ်ဆောင် မှု တွေ ကြောင့် အနုပညာ နယ်ပယ် မှာ အောင်မြင် လာခဲ့ တာ ဖြစ် ပါ တယ်..။ လက်ရှိ အချိန် ထိ လည်း အနုပညာ အလုပ် တွေ ဆက်တိုက် လုပ်ကိုင် နေပြီး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ အချစ်တွေ ကို ရရှိနေ တာ ဖြစ် ပါ တယ် .. ။
လတ် တလောမှာ လည်း ဖူးပွင့်သခင် က အပျင်း ပြေ Tik Tok လေး တွေ ဆော့ကစား ပြီး ချစ်တဲ့ သူတွေ အတွက် ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးထား ပါတယ်..။ ဒါ့ အပြင် သူမရဲ့ Tik Tok လေး တွေ ကလည်း အသည်းယား စရာကောင်း ပြီး ရေပန်းစား နေ တာ တွေ့ရပါ တယ် .. ။ ယခု တစ်ခါ မှာလည်း နောက်ထပ် ပရိသတ် တွေ ရင်ခုန်သွား လောက် အောင် အမိုက် စား Tik Tok လေး ကိုတင်ပေး လာခဲ့ ပါ တယ် .. ။
ဒီဗီဒီယို လေးထဲမှာ တော့ ဖူးပွင့်သခင် က ခေတ်စား နေတဲ့ သီချင်း လေး ကို ကိုယ်ဟန် အမူ အရာလေး နဲ့ ကြွကြွရွရွ လမ်းလေး လျှောက်ပြီး ဆော့ ကစား ထားတာ ဖြစ် ပါ တယ်..။ ဒါ့ အပြင် လုံးကြီး ပေါက်လှ အမိုက် စား ကိုယ်လုံး လေး ကလည်း အထင်းသား ပေါ်လွင်ပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေတာ ဖြစ် ပါ တယ်..။ ပရိသတ် တွေ လည်း မင်းသမီး ချောလေး ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ အမိုက်စား Tik Tok လေး ကို သဘောကျ မယ်လို့ မျှော်လင့် မိပါ တယ်နော် … .
source & video credit : Phoo Pwint Tha Khin ’ s fb page
စမတ္ က်တဲ့ အရပ္ အေမာင္း အျပင္ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိတဲ့ အလွ တရားေတြ ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး ေယာက်ာ္း ေလး ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ အသည္း ေတြကို ေႁခြခ် ထားနိုင္ တဲ့ သူက ေတာ့ မင္းသမီး ေခ်ာ ေလး ဖူးပြင့္ သခင္ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ သူမဟာ ဗီဒီယို ဇာတ္ကား ေတြ ကို မ်ားစြာ ရိုက္ကူး လာ ခဲ့ၿပီး ပီျပင္ တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မႈ ေတြ ေၾကာင့္ အႏုပညာ နယ္ပယ္ မွာ ေအာင္ျမင္ လာခဲ့ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ လက္ရွိ အခ်ိန္ ထိ လည္း အႏုပညာ အလုပ္ ေတြ ဆက္တိုက္ လုပ္ကိုင္ ေနၿပီး ပရိသတ္ ေတြ ရဲ့ အခ်စ္ေတြ ကို ရရွိေန တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ .. ။
လတ္ တေလာမွာ လည္း ဖူးပြင့္သခင္ က အပ်င္း ေၿပ Tik Tok ေလး ေတြ ေဆာ့ကစား ၿပီး ခ်စ္တဲ့ သူေတြ အတြက္ ျပန္လည္ ေဖာ္ၿပ ေပးထား ပါတယ္..။ ဒါ့ အျပင္ သူမရဲ့ Tik Tok ေလး ေတြ ကလည္း အသည္းယား စရာေကာင္း ၿပီး ေရပန္းစား ေန တာ ေတြ႕ရပါ တယ္ .. ။ ယခု တစ္ခါ မွာလည္း ေနာက္ထပ္ ပရိသတ္ ေတြ ရင္ခုန္သြား ေလာက္ ေအာင္ အမိုက္ စား Tik Tok ေလး ကိုတင္ေပး လာခဲ့ ပါ တယ္ .. ။
ဒီဗီဒီယို ေလးထဲမွာ ေတာ့ ဖူးပြင့္သခင္ က ေခတ္စား ေနတဲ့ သီခ်င္း ေလး ကို ကိုယ္ဟန္ အမူ အရာေလး နဲ႔ ႂကြႂကြရြရြ လမ္းေလး ေလၽွာက္ၿပီး ေဆာ့ ကစား ထားတာ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ ဒါ့ အျပင္ လုံးႀကီး ေပါက္လွ အမိုက္ စား ကိုယ္လုံး ေလး ကလည္း အထင္းသား ေပၚလြင္ၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေနတာ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ ပရိသတ္ ေတြ လည္း မင္းသမီး ေခ်ာေလး ဖူးပြင့္သခင္ ရဲ့ အမိုက္စား Tik Tok ေလး ကို သေဘာက် မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ မိပါ တယ္ေနာ္ … .
Previous post အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အမူအရာလေးနဲ့ အသစ်ဆန်းလေး Tik Tokဆော့ပြလိုက်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
Next post ဖြူနု ဝင်းမွတ် နေ တဲ့ အတွင်းသား အလှလေးတွေ အထင်းသား မြင်နေရတဲ့ ရေကူးကန်ထဲက Lလစ်ရှား ရဲ့ အလန်းစား ဗီဒီယိုလေး